Mpanamboatra sy mpamatsy kitapom-bola - Fividianana poketra China
Ny valon-drindrina vita amin'ny volon-dehilahy dia ny lamaody ho an'ny tanora tanora Buckle laharam-pahamehana Position isan-3
Vita vita amin'ny hoditra PU avo lenta sy kalitao. Ny modely litchi marefo dia malefaka, feno rivotra sy mahatsiaro ho tsara ary azo diovina amin'ny lamba mando.
Tombontsoa fohy vita amin'ny Magnetika
Vita amina akora PU manana kalitao lehibe, famolavolana manana ny habeny, azonao atao ny mametraka sary, karatra amin'ny banky, banky, banknotes, fanovana tsy misy dikany, sns., Ny zipo mainty afenina miafina dia afaka mametraka fisavana lehibe, sns, azo antoka ary azo itokisana.
Vehivavy kitapo fonosana be dia be karazana karazana 2020 vaovao kitapo finday fonosana Koreana vaovao
Ity kitapo poketra lehibe ity dia vita amin'ny PU, avo lenta, salama ary miaro tontolo iainana. Lamaody marevaka, loko manankarena, tsy fahita anaty rano, porofom-hamandoana, mateza, fahatsapana tanana tsara ary azo diovina amin'ny lamba mando.
Ny poketran'ny lehilahy dia faritra lava manify faritra miendrika fizarana 3 mametaka kofehy maro karatra fehikibo vaovao fehikibo
kalitao tsara tarehy sy tontolo iainana pu hoditra, rano madio, hamandoana be ranony, fofonaina, tsotra sy manafody mametaka kitapom-pitiavana, mahazo aina tsara, fanomezana ny raharaham-barotra, fahatsiarovana fitsangatsanganana, safidy tsara indrindra ho an'ny lanonana fitsingerenan'ny andro nahaterahana.
Vehivavy kitapo fonosana lava be dia be ny habetsaky ny kapila poketra fonosana vehivavy fonosana vita amin'ny kitapo vita amin'ny fonon-tanana
Ny fametahana kofehy roa-zoro azo tanterahina lehibe dia vita amina fitaovana PU manitra sy kalitaona. Rano maloto, hamandoana be, mamirapiratra, endrika feno, maro loko, mateza, mahatsiaro tsara, azo diovina amin'ny lamba mando.
Kitapo vehivavy kitapo mamirapiratra kitapo lava be mifanitsy loko loko kitapo poketra
Ity kitapo matevina ity dia vita amin'ny fitaovana PU manentana ny tontolo iainana sy fanodinana lokon'ny tanana. Ny endrika mifanentana amin'ny loko, ny marika miloko maro karazana, ny haingon-trano fandraisan'anjara vovoka, ny rano madio, ny hamandoana-porofon'ny hery sy ny mateza ary ny fahatsaranany endrika tsara, afaka manadio amin'ny lamba mando.
Kitapom-poketra fantsom-poketra fantsom-baravarankely mandritra ny finday kitapom-batsy
Vita vita amin'ny hoditra vita amin'ny loko ho an'ny kalitao avo lenta. Mahafinaritra izany ary azo diovina amin'ny lamba mando. Rano malefaka, feno rivotra, malefaka sady malama, kalitao avo lenta.
Kitapom-pitondrana tovovavy vaovao fonosana tovovavy lava-tsipika Koreana zipper mifanohitra loko loko kofehy be kitapo finday kitapo finday
Ity kitapo lehibe misy fehin-tsary misy famoronana retro, vita amin'ny hoditra PU avo lenta sy marefo ary salama. Randranon-drano, hamandoana be dia be, lamaody maro loko, mahazo aina hahatsapa, tsara tarehy ary mateza.
Ny kitapo vaovao kitapo fonosana kitapo lava fonosana poketra marobe fonosan'ny lehilahy miasa
Misafidy tsara ny hoditra vita amin'ny loko marefo kalitao avo lenta. Malefaka malefaka, malama tanteraka, ary azo diovina amin'ny lamba mando.
New Wallet lamaody vita amin'ny kasety ho an'ny fanaka
Vita vita amin'ny hoditra PU avo lenta, salama sy marefo. Ny kalitao tsara indrindra, tsy fahita fofona rano, fofonaina, fikasihana tsara, ary azo diovina amin'ny lamba mando.
Ny poketra fanaovan-damba fohy an'ny lehilahy vita amin'ny kitapo
Mandravaka lamaody vaovao tsy manara-penitra mavesatra ho an'ny tokan-tena amin'ny faribolana 3 fonosana tanora zipo marobe miatrika kitapo malefaka
Ny famolavolana manana ny tanjaky ny poketra dia ahafahana mameno tsara ny zavatra ilaina rehetra. Manana toerana 8 izy io ho an'ny fitahirizana karatra, izay ahafahana mameno ny filàn'ny orinasan-tserasera, fitsangatsanganana ary fiantsenana.